कुन-कुन माेबाइल सेटमा चल्छ फाेर-जी ? यी हुन फोर-जी चल्ने मोबाइल सेटहरु – Recent Nepal News
कुन-कुन माेबाइल सेटमा चल्छ फाेर-जी ? यी हुन फोर-जी चल्ने मोबाइल सेटहरु	काठमाडौं, पुस १७ —मुलुकको अग्रणी दूरसञ्चार प्रदायक नेपाल टेलिकमले आइतबारदेखि मोबाइलमा चौथो पुस्ताको डाटा इन्टरनेट सुविधा अर्थात फोर जी सेवा सुरु गर्दैछ । टेलिकमले आज आइतबारदेखि ताररहित थ्रीजीको विकसित प्रविधि फोरजी सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । हालको थ्रीजीको तुलनामा फोरजी सेवा ५ गुणा बढी द्रुतगतिमा सञ्चालन हुने टेलिकमको दाबी छ । फोरजी प्रयोगबाट द्रुतगतिमा इन्टरनेट सेवा, भिडियो कलका अतिरिक्त ठूला फाइलहरु अपलोड र डाउनलोड गर्न सहज हुनेछ ।
सीमित सिममा मात्रै फोर जी
फोर-जी दिउँसो १ बजेदेखि सुचारु,यसरी गर्नुहोस् एक्टिभ
कसरी चलाउने फोरजी ?
मोवाइलमा फोर जी सेवा सुचारु गर्न एलटीइ (लङ टर्म इभ्यालुएशन) इनेवल गर्नुपर्छ । यो मोवाइलमा थ्रीजी इनेवल गरे जसरी गर्न सकिन्छ । त्यसपछि प्रयोगकर्ताले फोजी सेवा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । एलटिइ इनेवल गर्न टेलिकमले कोर्ड उपलब्ध गराउँछ । फोरजी सार्वजनिक गर्नुअघि आफ्ना ग्राहकलाई सो कोड उपलब्ध गराइने टेलिकमले जानकारी दिएको छ ।
टेलिकमले फोरजीको मूल्यको बारेमा भने अझै टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । हाल सो सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन भइरहेकोले केही समयभित्रै मूल्य निर्धारण गरिने भएको छ । तर फोरजीको मूल्य थ्रीजीको तुलनामा केही महंगो हुने टेलिकमले जानकारी दिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् । टेलिकमको फोर–जी को शुरुवात जनवरी १ देखि, कसरी चलाउने फोर-जी ?
थ्रीजीकै भाउमा फोरजी चलाउन पाइने, चार दिन सित्तैमा
टेलिकमको फोर–जी पुराना सिमकार्डमा नचल्ने,प्रयोगकर्तासँग कस्तो सिम हुनुपर्छ ?
टेलिकमको फोर जी सेवा आजदेखि सुरु, न्यूनतम स्पिड ३५ एमबी प्रतिसेकेण्ड
(मोबाईलफोन डाटा सेतोपाटी वाट)
Previousटेलिकमको फोर जी सेवा आजदेखि सुरु, न्यूनतम स्पिड ३५ एमबी प्रतिसेकेण्ड
Nextफोर-जी कसरी चलाउने तनावमा हुनुहुन्छ ? घरमै बसी यसरी गर्नुहोस् एक्टिभेट